Tag: brian polster » Martech Zone
Tag: brian polster
Broadleaf Commerce: Invest in Customization, Kwete Rezinesi
Mugovera, June 27, 2015 Svondo, June 28, 2015 Douglas Karr
Nguva Yokuverenga: 3 maminitsi Mukati mekushambadzira tekinoroji nzvimbo, pakanga paine kukura kukuru neSoftware seSevhisi uye kugona kutenga izvo zvaunoda kunze kwebhokisi. Nekufamba kwenguva, SaaS yakakunda mutengo wekuvaka uye makambani mazhinji eSawaS akabvisa pavakakunda kuvaka pamwe nekutenga nharo yebhajeti. Makore gare gare, uye vatengesi vari kuzviwana vari pane imwe nzira. Icho chokwadi ndechekuti kuvaka kunoramba kuchidonha mumutengo. Pane zvikonzero zvinoverengeka nei iyo